iphone second hand များ ဝယ်ယူမည်ဆိုလျင် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ - Min Oaker
ဗပာုသုတ iphone second hand များ ဝယ်ယူမည်ဆိုလျင် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
iphone second hand များ ဝယ်ယူမည်ဆိုလျင် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
by Anonymous on 8:01 PM in ဗပာုသုတ
၁. phone ရဲ့ body ပိုင်းကို အရင် စစ်ဆေးပါ အပွန်း အစင်း အနာအဆာ body ဖြောင့်တန်းနေသလား ကွေးသေ လား အနာပါလျင်လည်း လွတ်ကျ ထားတာလား cover တပ် ထားလို့လား Power key / Volume key / vibrate key / စသည့် key များကို စစ်ဆေးပါ။
၂. sensor တွေ စစ်ဆေးရပါမယ် နား sensor အလုပ် လုပ်မလုပ် finger print sensor အလုပ် လုပ်မလုပ်။ (5s and later)
၃. charger ပေါက် အားသွင်း လျင် ဝင်မဝင် computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီတော့ detect သိမသိစစ်ရပါမယ် Earpod အပေါက် အလုပ် လုပ်မလုပ် နားကြပ်ထိုးပြီးစစ်ပါ။
၄. camera ပိုင်း စစ်ဆေးပါ camra သီး တည့်မတည့် Resolution ကြည်မကြည် flash မီးလင်းမလင်း စစ်ဆေးပါ။
၅. ပစ္စည်း မှန် မမှန် or body မှန် မမှန်စစ်ဆေးပါ setting >general > About ထဲက imei နဲ့ body နောက်ကျောဘက်မှာ ပါတဲ့ imei နဲ့ box မှာ ပါတယ် imei များ ထပ်တူဖြစ်နေရပါမည်။
၆. lcd ကောင်း မကောင်း ကြွမကြွ စစ်ဆေးပါ lcd မှာ အစစ်ပျောက်များ စစ်ဆေးပါ lcd ကို အနည်းငယ်ဖိ၍ flim ပြာနှင့် ကပ်မကပ်စစ်ဆေးပါ screen rotation ရမရ စစ်ဆေးပါ brightness အလင်းအမှောင်း စသည့်များ စစ်ဆေးပါ။
၇. touch ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးပါ app တစ်ခုကိုဖိလျပ် touch screen ရဲ့နေရာတိုင်း ကို ပွတ် ဆွဲပါ touch မကောင်းတဲ့နေရာဆို အဲဒီ app က ဆက်၍ ဆွဲလို့မရဘဲ နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
၈. network ပိုင်းတွေစစ်ဆေးပါ wifi bluetooth cellular data 3g 2g gps location service Compass အလုပ် လုပ်မလုပ် စသည့် စနစ်များ။
၉. mic / ring speaker / နား speaker စသည့် အသံပိုင်းဆိုင် \_ရာ အချက်အလက်များ စစ်ဆေးပါ။
၁၀. icloud ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ www.icloud.com/activation မှာ imei ရိုက်ပြီးစစ်ဆေးပါ။ (icloud စစ်နည်းကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်)
၁၁. ဘယ်နိုင်ငံ export လဲ သိချင်ရင်တော့ Setting > general > about ထဲက model ဆိုတာတွေအောင် ရှာပါ နောက်ဆုံးက letters သုံးလုံကိုကြည့်ပါ ZP/A . ZA/A LL/A စသည့်တို့သည့် export နိုင်ငံများကိုသတ်မှတ်ထားသည် letters များဖြစ်သည်။
၁၂. battery အားစား မစား စစ်ပါ Battery % on ထားပြီ ဖုန်းကို 10 မိနစ်လောက်စောင်ပြီးကြည့် % ဘယ်လောက်လျော့သွားလည်းဆိုတာ။ မှတ်ချက်။ ။ စက်ပူမပူ စမ်းကြည့်ပါ။
Credit : Hla Lwin Oo
By Anonymous at 8:01 PM